Koonfur Africa oo gar-gaar u fidineyso dadka Soomaaliyeed ee abaaraha wax yeeleeyeen. – SBC
Koonfur Africa oo gar-gaar u fidineyso dadka Soomaaliyeed ee abaaraha wax yeeleeyeen.
Ururada dowliga ah iyo kuwa aan dowliga eheyn ayaa dhamaantood waxa ay ku baaqeen in loo gurmado dadka Soomaaliyeed oo ay abaaruhu wax yeeleeyeen ayagoo ugu baaqay dhamaan dadka reer Koonfur Africa in ay bixiyaan waxa ay awoodaan.
Waxaa warbaahinta ka cadeeyay arintan wasiirka Howlaha guud iyo xiriirka caalamiga ah Marius Fransman oo sheegay in ay wax walba oo ay awoodaan ku caawin doonaan dalka ay abaaraha wax yeeleeyeen ee Soomaaliya, asagoo xusay in south afrika ay bixin doonto dhaqaale lagu qiyaasay 1-million oo ku dhiganta lacag lagu qiyaasay ilaa 80.000$ oo doollar.
Sidoo kale waxa uu sii raaciyay hadalkan”waxaan ugu baaqeynaa dadka reer koonfur Africa in ay caawiyaan walaalohooda dhibaateysan ee somalia, aynu si wada jir ah u caawino caruurta, hooyooyinka,iyo waayeelada”ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka oo muujiyey in uu ka xun yahay dhibaatada heysata shacabka Soomaaliyeed.
Dowlada Koonfur Africa ayaa bilowday in ay warbaahinta ka tabiso sidii loogu gurman lahaa abaarta, waxaa shalay oo jimco ah aad looga sii daayay arintan warbaahinta loo yaqaano SABC oo ah Tv-ga dowlada si dadka loogu baraarujiyo in ay la baxaan waxa loogu yeeray charity oo ah sadaqo.
Arintani ayaa ku soo beegantay ka dib markii Qaramada Midoobay ay maalintii arbacada ka dhawaajiyeen in Soomaaliya ay ku jirto xaalada xun oo hadii aan laga soo gaarin in ay macluul u dhiman doonaan taasoo ah midii ugu xumeed muddo laga joogo 60-sano.
Tiro lagu qiyaasay kala bar Soomaalida oo ah 3.7million ayaa la ildaran abaarta sida warkan un-ka lagu sheegay ku waasoo 2.8 million ka mid ah ay ku noolyihiin dhanka koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Hooyooyinka ayaan awoodin in ay ilmaha naas nuujiyaan nafaqa darro dardeed caruurta oo dhana waxa ay u dhimanayaan macluul.
Radio-ka voice of the cape ayaa jimcihii dadka ku baraarujinayay in ay ka qeyb qaataan donation-ka ama caawinta oo ah qaaraanka loogu tala kalay dadka Soomaaliyeed ayagoo u yeerinayay dadka bankiyo ay lacagta ku hagaajin karaan.
Sidoo kale waxaa inta badan maalintii jimcaha masaajidyada dalka laga sheegay in ay muslimiinta koonfur Africa caawiyaan muslimiinta ku nool Soomaaliya oo xaalada adag ku jiro.
Koonfur afrika ayaa waxa ay ku biireysaa dalalka gar-gaar bini aadanimo u fiday dalka ay abaaraha dagaalada iyo nabad la’aanta baahsan wehelka u noqday iyo dadka lagu iloobay bariga afrika ee Soomaliya.
Sidoo kale waxaa jiro Soomaali aad u fara badan oo ayagana ay ka go’antahay in ay caawiyaan dadka soomaaliyeed ee xaladooda laga soo deyrinayo.
SBC Cape town koonfur Africa.